मजदुरका भाषण गर्नेहरु हराए, तातो भात बाँड्नेहरु खुलामञ्च मै छन् !
मजदुरका भा.षण गर्नेहरु हराए, तातो भात बाँड्नेहरु खुलामञ्च मै छन् !
काठमाण्डाै- कोही भोको बस्नु पर्दैन भन्दै खुलामञ्चमा नारा लगाउनेहरु कोही स´त्तापक्षमा छन्, कोही प्रतिपक्षमा। नारा र भा´षण सुनेर उ´त्साहित हुँदै ताली बजाउनेहरु त्यही खुलामञ्चमा एक छाक भातको आ´शामा कुरिरहेका छन् । गाँस, बास र कपासको निम्ती भन्दै च’र्काचर्का नारा र भा´षणले गुञ्जने काठमाण्डौको खुलामञ्च, नयाँ बानेश्वर लगायतका ठाउँ अहिले एक छाक भात खाने थलोको रुपमा प’रिणत भएको छ ।
मञ्चमा न्यानो सोफामा बसेर रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नेहरु कता हराए पत्तो छैन । यी ठाउँहरुमा तातो भात खानका लागि दिनहुँ सयौं मजदुर निराश हुँदै लामबद्ध हुने गरेका छन। लामो समय दुई पेट खानाका लागि पसिना बगाएका उनीहरुलाई को’रोनाका कारण गरिखाने बाटो गु’मेपछि यही स’हरमा अहिले पेट भ’र्न क`ठिन भएको छ । तर केही परो’पकारी म’न भएकाहरुले भने भाषणले भन्दा पनि भातले पे’ट भरिन्छ भन्दै खाना खुवाउँदै आएका छन् ।
भोकाहरुको पेट पर्दै जुजुकाजी महर्जन : यस्तै परोपकारी मध्येका एक हुनुहुन्छ, काठमाण्डौ स्वयम्भूका जुुजुकाजी महर्जन । हिजोआज महर्जनको दैनिकी काठमाण्डौको विभिन्न ठाउँहरुमा भोका मानिसको पेट भर्दैमा बि´त्छ । उहाँले क्षेत्रपाटी ठमेल, बसन्तपुर र टेकुमा खाना खुवाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले ल´कडाउनको दोस्रो दिनदेखि खाना खुवाउँदै आउनु भएको हो ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, ल´कडाउनका कारण रोजगारी गुमेका मानिसहरु प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय भने काठमाण्डौमा घर भएका तर आम्दानी नभएकाले समेत खाना खाने गरेका छन् । सरकारले नि´षेधाज्ञा गरेपछि काठमाण्डौमा घर भएका तर आयआर्जन गुमे’काहरु पनि खानाका लागि आउने गरेका हुन् ।
जुजुकाजीले ल’कडाउन नहुँदा पनि उहाँले असहाय र गरि´ब बा´लबालिकालाई सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो। पहिलेदेखि नै स्कुलहरुमा गरि´ब असहाय विद्यार्थीहरुलाई उहाँले सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो। ल´कडाउन भएको केही दिनपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने एउटा परिवार खानाका लागि स’मस्या भएको भन्दै सानेपादेखि उहाँको घरसम्म आएको देखेर उहाँमा दयाको भावना पलायो । उज्यालो अनलाईनमा जानुका दु´वाडीले लेख्नु भएको छ ।